तपाईको कारलाई लामो समय सम्म मद्दत गर्न Simple सरल सुझावहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 25, 2021 फेब्रुअरी 25, 2021 एलेक्स बेल्से ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
कारहरू सामान्य रूपमा लामो समय सम्म टिक्न सक्दैनन् किनभने राम्रोको लागि ब्रेक गर्नु अघि।
यो ठंढो, नम, र चरम गर्मी सहित कठोर मौसमबाट तपाईंको कार बचाउनको लागि महत्वपूर्ण छ।
नियमित रखरखाव र चेकअपहरू एक वर्षमा एक पटक ओभरहाउस भन्दा बढी आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ किनकि यसले तपाईंलाई लागत फैलाउन मद्दत गर्दछ।
तर तल पाँच सरल सल्लाहहरू यहाँ मद्दतको लागि छन्! चाहे तपाईले नयाँ कारमा लगानी गर्नुभयो, प्रयोग गरिएको मोडल किन्नुभयो, वा उही गाडीलाई वर्षौंदेखि ड्राइभि driving गर्दै हुनुहुन्छ, तल दिइएका सुझावहरू केही उत्तम अभ्यासहरू हुन् यदि तपाई आफ्नो कारको अधिकतम दीर्घायु सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने।
वास्तवमा, केवल एक वा दुई सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दा पनि तपाईंको कारको आयु र दीर्घायु बृद्धि गर्न सक्दछ, जुन वर्षौंसम्म सुरक्षित र आरामदायी ड्राइभि .मा अग्रसर हुनेछ।
तपाईंको कार सफा राख्नुको अर्थ यो aerated राख्नु र एक उचित तापमान मा हुन सक्छ।
सुझाव १: तपाईंको वाहन सुरक्षित रूपमा भण्डार गर्नुहोस्
धेरै बीमा कम्पनीहरूले रिपोर्ट गरेको छ कि तिनीहरू असुरक्षित कारहरू कसरी पार्क र भण्डार गरिएको छ भनेर देखेर छक्क परेका छन्। यसले तिनीहरूको सुरक्षा र सुरक्षालाई दर्शाउन सक्छ, तर खराब मौसममा उनीहरूको जोखिममा।
तपाईको कारलाई कहिले पनि रोक्ने वा खतरनाक स्थितिमा नछाड्नुहोस्, र तपाईको सुरक्षित, सुरक्षित, र राम्रो प्रकाश भएको क्षेत्रमा पार्क गर्न सुनिश्चित गर्न सबै प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं नियमित रूपमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको लकहरू र सुरक्षा प्रणालीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्, र तपाईंको कार अलार्म अझै पनि काम गर्दछ।
यो ठंढो, नम, र चरम गर्मी सहित कठोर मौसमबाट तपाईंको कार बचाउनको लागि महत्वपूर्ण छ। यसले कारमा अनावश्यक तनाव पैदा गर्न र रस्ट, सड्न, वा सामान्य पोशाक र च्यात्न निम्त्याउन सक्छ।
यदि गेराज तपाईको लागि सम्भव समाधान छैन भने, समर्पित कार कभर प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस् जुन तपाईंको मेक र मोडेलका लागि उपयुक्त छ, र टिकाऊ र उपयुक्त कपडाबाट बनेको छ।
सुझाव 2: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वाहन सफा छ
तपाईंको कार सफा राख्नु भनेको व्यर्थ वा सौन्दर्य सामग्री मात्र होइन! सरसफाइको पनि मतलब भनेको तपाईंको कारलाई सुख्खा, राम्रोसँग हावामा राखिएको, र भग्नावशेषबाट मुक्त भएको सुनिश्चित गर्नु हो।
दागले तपाईंको आँखाको लाइनलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ, जबकि मलबे खतरनाक हुन सक्छ यदि यसले पेडलहरू वा गियर स्टिकको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्दछ (मानौं तपाईं म्यानुअल गाडी चलाउनुहुन्छ)।
तपाईंको कार सफा राख्नुको अर्थ यो aerated राख्नु र एक उचित तापमान मा हुन सक्छ। यो नम, वा तातो र चिसो को अधिक द्वारा उत्पन्न कुनै पनि मुद्दा रोक्न मद्दत गर्दछ।
लामो यात्राको अन्त्यमा छुटकारा पाउनको लागि तपाईको कारमा एक तोकिएको फोहोर ब्याग राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, वा अन्यथा प्रयोगमा सहजताको लागि कारमा सुरक्षित भण्डारित आपूर्ति सफा गरिरहनुहोस्।
यो प्रायः बोरियतबाट बाहिर हुन्छ वा उस्तै कारबाट थकित बढ्दो हुन्छ जुन खरीददारहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्न छनौट गर्दछन्।
सल्लाह 3: नियमित मर्मतमा लगानी गर्नुहोस्
तपाईको कारको दीर्घायु को लागी कुनै सम्मानित ग्यारेजमा नियमित रखरखाव भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण कुनै चीज छैन। यसले तपाईंलाई विश्वासको साथ ड्राइभ गर्न अनुमति दिँदछ, यो थाहा पाएर कि एक पेशेवरले यसलाई सुरक्षित र सडक लाग्दछ।
तपाईंको टायर र ईञ्जिनमा परिवर्तनले कारलाई ड्राइभ गर्नको लागि अझ बढी सहज बनाउँदछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं कार बेच्न वा अपग्रेड गर्न चाहानुहुन्छ - र यसरी यसको दीर्घायु बढाउन मद्दत गर्दछ!
नियमित रखरखाव र चेकअपहरू एक वर्षमा एक पटक ओभरहाउस भन्दा बढी आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ किनकि यसले तपाईंलाई लागत फैलाउन मद्दत गर्दछ। यो अधिक लागत प्रभावी पनि हुन सक्दछ किनकि यसले साना समस्याहरू पहिचान गर्न सक्दछ उनीहरूको ठूलो हुने सम्भावना हुनु अघि (र महँगो)।
तपाईको स्थानीय ग्यारेजमा नियमित भ्रमणहरूमा लगानी गर्नुहोस् र तपाईंको कार लामो बर्ष सम्म बाँच्न सक्दछ!
सुझाव 4: अधिक कुशलतापूर्वक ड्राइव गर्नुहोस्
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि ड्राइभरहरू अधिक कुशलतापूर्वक ड्राइभ गरेर हजारौं पाउन्ड बचत गर्न सक्दछन्। यो किनभने कुशल ड्राइभि less कम ईन्धन प्रयोग गर्दछ, साथै कम पहनने र समग्रमा कारलाई च्यात्नुको कारण हो।
दैनिक बानीको रूपमा दक्ष रूपमा ड्राइभ गर्नाले तपाईंको कारको समग्र दीर्घायु बृद्धि गर्न सक्दछ। यसले उच्च सुरक्षित गियरमा गाडी चलाउनु, अगाडि सडकको पूर्वानुमान गर्नु, ढिलो, र तपाईंको गाडीको हावा प्रतिरोध घटाउन समावेश गर्न सक्दछ।
केहि माथि हेर्नुहोस् कुशल ड्राइभिंग को लागी कार्यक्षम सुझावहरू, र तपाईं आफ्नो कार को शेल्फ जीवन को बढ़ावा दिन सक्छ - र प्रक्रियामा तपाईंको ईन्धन बिल मा पैसा बचाउन!
सुझाव 5: द्रुत र सजिलो अपग्रेड प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँको कार अधिकतम कार्य गरीरहेको छ भने, यसको दीर्घायु बढाउनु भनेको तपाईको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन गर्नु जत्तिकै सजिलो हुन सक्छ। यो प्रायः बोरियतबाट बाहिर हुन्छ वा उस्तै कारबाट थकित बढ्दो हुन्छ जुन खरीददारहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्न छनौट गर्दछन्।
तपाईं साना बनाउन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ तपाईंको कारमा परिवर्तन र अपग्रेडहरू नयाँ गाडी किन्नु भन्दा यो अझ किफायती हो, तर यसले ड्राइभि it्गलाई सम्पूर्ण नयाँ अनुभव जस्तो महसुस गर्दछ। तपाईले गाडी चलाउन मन पराउनुहुने कारको राम्रो देखभाल गर्न सम्भावना बढी हुन्छ, र केहि अपग्रेडले तपाईंको हालको कारमा पनि मूल्य थप्न सक्छ।
कार सांप्रदायिक समाचार मर्मतका